Yiziphi izici okufanele zicatshangelwe ekukhetheni izinto zefenisha yangaphandle?
Ihlobo liza, nefenisha yangaphandle izosetshenziswa maduzane. Ungacabanga ukuthi ifenisha yangaphandle kufanele ibe nezici ezifanayo nefenisha yasendlini njengamatafula, izihlalo namasofa, njengokuqina, ukunethezeka nesitayela (futhi-ke, intengo). Lokhu kuyadingeka. Kepha umehluko omkhulu ...
Ifenisha nayo ingaba ubuciko
Enye ifenisha uqobo iqukethe izinto ezibaziwe, ikakhulukazi lezo zokhuni, insimbi, i-ceramic noma i-resin, engahlukaniswa ngesinye isigaba ngaphandle kwezihlalo ezingokoqobo. Uma kungenzeka, cela umdwebi ukuthi abheke ukuthi ingadi yakho nefenisha yakho izobekwa kuphi, noma umnikeze okuningi ...
Yiziphi izidingo zefenisha yangaphandle?
Ukuze wenze ifenisha yangaphandle ihambisane kangcono nemvelo yangaphandle futhi yenze abantu babe nemisebenzi yokuzilibazisa nokunethezeka endaweni engaphandle, ifenisha yangaphandle ivamise ukuba nalezi zidingo ezilandelayo: 1. Impilo yesevisi ende, eqinile Uma iqhathaniswa nefenisha yangaphandle, okuvelele kakhulu .. .